Sidee baan ku codsan kartaa magangelyo? | Warbixin ka socota Xarunta Qaxootiga Online | Refugee Center Online
Photo: Hector Silva - Customs iyo Ilaalinta Xuduudaha
Sidee ayaan u codsadaa magangelyo? Boggan wuxuu leeyahay macluumaad kaa caawinaya in aad barato sidii aad u dalbato magangelyo.
Waa maxay doonka?
Asylum waa marka aad hesho ilaalinta dawladda Maraykanka, maxaa yeelay, aad si nabad ah aan ku noqon karin dalkaaga hooyo. Sanad walba dad u yimid inuu Maraykanka raadinaya ilaalin waayo, waxay ka soo gaaray cadaadis ama cabsi ah in ay la silcin doonaa sabab u tahay: Race, Diinta, Dhalashada, Xubin koox bulsho gaar ah, ama fikrad siyaasadeed.
Boggan waxaa loogu tala galay inuu kaa caawiyo inaad fahamto badan oo ku saabsan magangalyo iyo inay kaa caawiyaan inaad hesho khayraadka haddii aad u baahan tahay in aad dalbato magangalyo. Boggan waxaa sida aan loogu tala galay sida la-talin sharci.
Sidee ayaan u codsadaa magangelyo?
Si aad u codsato magangelyo, aad u baahan tahay in ay ku sugan Mareykanka marka aad codsaneyso. Haddii aad timaaddo Maraykanka la visa sax ah ama hab inay soo galaan Maraykanka, waxaad geli kartaa Mareykanka ka dibna soo gudbin codsigaaga magangalyada. Inta badan, waa in aad ka dalbato magangalyo hal sano gudahood markaad timaado dalka Mareykanka, inkasta oo aad weydiisan kartaa in lagaa dhaafo.
Maxaa dhacaya haddii aan ahay oo ku taalla xuduudda-US Mexico?
Maamulka Trump waxaa hadda la jabiyay sharciga caalamiga ah iyo ma jidaynayey dadka magangalyo doonka ah in ay galaan Maraykanka. Dhamaan dadka magangelyo doonka ah lagu hayo ee xerooyinka ama xarumaha dadka lagu hayo. Carruurta ayaa laga qaaday waalidkood. Read macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xeerarka cusub ee magangelyo doonka ah oo ku taala xuduuda Maraykanka.
Guide A si Warqadaha Case
Si aad u hesho magangelyo Maraykanka, waxay ka caawisaa kiiskaaga haddii aad leedahay caddayn si ay u caddeeyaan aad ugu silcin jiray ama lagu xadgudbo, iyo in dowladda ma aad ilaaliso. cadayn badan oo aad fursad u fiican aad leedahay inay ku guuleysato kiiskaada magangelyo si ay u awoodaan in ay sii joogaan dalka Mareykanka. U hubso in had iyo jeer runta sheeg, haddii kale aad isla markiiba kiiskaaga diidi karaa. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in aad u gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta. Waxaa muhiim ah in waqti la xasuusnaado waxa ku dhacay, on taariikhda saxda ah. Haddii aad khalad samayso, Dowladda wuxuu ku fikiraa inaad been.
Halkan waxaa ku qoran noocyada caddayn in aad isticmaali karto si ay u taageeraan kiiska magangelyada:
waraaqaha aqoonsiga (i.e. baasaboorkaaga, shahaadada dhalashada, kaarka aqoonsiga ardayga, diiwaanka qoyska, kaarka aqoonsiga qaranka, ama kaadhka xubinimada xisbiga siyaasadeed.)
waraaqaha aqoonsiga xubnaha qoyska kuwaas oo u safray Mareykanka kula
shahaadada guurka iyo dhalashada shahaadooyin loogu talagalay carruurta
diiwaanka Academic (i.e. diiwaanka dugsiga, shahaadooyinka, iyo shahaadado)
Joornaalka waxa ka isbitaal ama daaweynta sabab u gudbisid dalkiisa hooyo
Xabsi ama maxkamadda diiwaanka
Kasta oo codsiyada magangelyo ama qabyada ah markhaatiyaalka in aad abuuray laga yaabaa in
Dukumenti kasta oo uu soo xareeyo qayb kasta oo ka mid ah dowladda Mareykanka
documents kasta oo kale oo aad u malaynayso in laga yaabo in ay muhiim
Haddii aadan awoodin in ay keenaan dokumentiyo kuwan kula socdaa marka aad cararay dalkaagii hooyo, waa okay. Waxaad ka akhrisan kartaa dheeraad ah ka dib on this page ku saabsan caddaynaya kiiskaada magangelyo aan waraaqaha.
khayraadka More on sida loo codsado magangelyo
Asylum ee dalka Mareykanka, Wikihow
Sida loo dalbado magangalyo ee dalka Mareykanka
An sahlan loo akhriyi karo, tallaabo-tallaabo sharaxaad leh macluumaad badan oo ku saabsan diyaarinta habka codsiga magangalyada.
Booqo Pro-Bono Legal Resources iyo Help dheeraad ah bogga si aad u hesho qof ku siin karaan talo xirfadeed for kiiskaaga.
United States Citizenship & Adeegyada Socdaalka: Asylum Codsiga
habka magangalyada, sharaxay by Citizenship and Immigration Services Maraykanka. View Codsiga I-589 magangelyada iyo midka heynta raritaanka. Baro codsiga. Waxaad u baahan tahay si ay u buuxiyaan hal sano gudahood ah uu yimid Mareykanka.
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo ee magangelyo doonka
Waxaa laga yaabaa inaad qabtid su'aalo badan oo. Halkan yihiin qaar ka mid ah jawaabaha su'aalaha ay dadka weydiiyaan raadinaya ilaalin ee dalka Mareykanka.
Ma waxaad tahay labada dhinac oo ka mid ah United States / Mexico Border oo aanad hubin waxa la sameeyo soo socda? Ma waxaad raadineysaa hoy, taageero sharci, cuntada, iyo in laga caawiyo magangelyo? aad ka yar tahay 18? The Refugee Center Online ayaa soo ururiyay qaar ka mid ah khayraadka iyo macluumaad ku saabsan ururada laga yaabo in ay awoodaan in ay kaa caawiyaan in aad siiyaan baahiyaha asaasiga ah iyo talo ah ee aad kiiska.
macluumaad UNHCR dadka magangelyo doonka ah
Bogagga UNHCR oo ku saabsan sida loo dalbado magangalyada waa in English, Faransiiska, Isbaanish iyo Carabi.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro wareysiga magangelyo doonka?
Video: wareysiga magangelyo doonka jeesjeesa
garyaqaan A ka dhigaa in uu noqdo sarkaalka magangalyo iyo weydiiyo su'aalo lahaa sida caadiga ah in lagu weydiiyo inaad wareysi. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad diyaariso jawaabaha kuu gaar ah su'aalaha ay ku weydiin doonaa inaad.
Sidee ayaan ku guuleysan karo kiiskaada magangelyo haddii aanan haysan caddayn la ii soo gaartay?
video Tani waxay ku saabsan sida loo guulaysto kiiska magangelyada, inkastoo aadan haysan cadeyn u tahay in aad la Dhibay. Waxaa la samayn karaa haddii aad muujin karto in ay jiraan nidaam ama hab-dhaqanka waxyeelo ee dalka.
Video: Dalbashada magangalyo - guuleystay kiiskaaga
Xeer hore ee Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyadaha, Carl Shusterman, wadahadalo ku saabsan sida aad ku guuleysan karto kiiskaada magangelyo iyada oo si taxaddar leh diyaarinta.
Video: siyaabo dhowr ah kiiska magangelyada waxaa la samayn karaa ee Maraykanka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u codsan karo oo u qalanto magangelyo Maraykanka.
Asylum Sharciga iyo Nidaamka
dheeraad ah oo ku saabsan magangalyo Baro, heyn raritaan, Heshiiska Qaramada Midoobay ee ka dhanka ah jirdilka, habka loo dalbaneysid magangelyo, sida si ay magangalyo halka lagu hayo waddanka u soo guurey, soo galootiga ah gaar ah xaaladda dhalinyaro ah, iyo xaaladda ilaaliyo ku meel gaar ah.
Hubi our Halka laga helo khayraadka sharciga ah bogga si aad u hesho qof kuu soo bandhigi kartaa tilmaam iyo talo xirfadeed oo ku saabsan kiiskaaga.
Asylum ee dalka Mareykanka, Human Rights First. Waxaa jira in ka badan hal hab inay soo galaan Maraykanka iyo hesho gargaarka. image Tani waxa ay muujinaysaa sida hab kasta Mareykanka waa hab ka duwan. Fiiro u yeelo in qaar ka mid ah siyaabaha galay Maraykanka ku jiri doona xabsiga waddanka u soo guurey.
Ogow Your Rights Buuggooda loogu talagalay dadka ajnabiga xiray ee Luqadaha kala duwan (Eng, taako, Carabi, Faransiiska, Urdu, Mandarin, Soomaali, Hindi, Punjabi)
Kuwani buugagan waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan macluumaad aasaasi ah si ay u soo guuray la siiyo fahamka xuquuqda ay u leeyihiin ka yar laga xoreeyo. sharciga lagu jiro socdaalka dacwadaha ama haddii ay soo qabqabteen oo xireen by the Department of Homeland Security. Macluumaadka ku jira buugagan waa in aan loo tixgalin in talo sharci, oo xiray dalka u soo guuray iyo kuwii ay jeclaayeen waxaa lagu dhiirigelinayaa inay doondoonaan aqoon talo sharci ah oo ka tirsan xarunta qaranka ee Immigrant Justice ama mid kale lagu kalsoonaan karo ururka.
Options ee magangelyo doonka ku jira saarista laakiin aadan haysan qareen
“Waxaan ahay cabsanayaan in Back Tag:” Guide A si Asylum, Raritaanka, iyo Shirweynihii La dagaalanka Silcinta
Ilaha Pro Se Magangelyo-doonka ku jira saarista
Haddii ay jirto ayaa amar soo saartay ee aad ka saarista ama masaafurinta, aad weli fursad u dalbaneysid magangelyo, xitaa haddii aadan haysan qareen. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha gudbinta magangalyo oo aan qareen.
Digniinta Khayaanada Anti (English)
Akhri macluumaadka this si aad iskaga dadka aan sharciga yiqiin dhab ah loo ilaaliyo! Waxaa jira dad iskadhiga doono inuu ku caawiyo si ay lacagtaada ku haysan karto. Baro sida loo aqoonsado oo aad naftaada ilaaliso!
Macluumaad loogu talagalay bulshada LGBTQ ah
document A waxaa loogu talagalay dadka ka baqaysid inaad ku dalkoodii ku noqdaan oo ay ugu Wacan inay Yihiin lesbian, gay, labeeb ama jinsi (LGBT) iyo / ama ay sabab u tahay xaaladda HIV. Waxaa laga yaabaa inaad difaac ka dhan ah masaafurin Haddaad ka Cabsataan laguu dhimi doono ama jirdilay haddii aad soo tarxiilay dalkaagii hooyo. Xarunta Immigrant Justice Qaranka waxaa laga heli karaa si ay u bixiyaan talo sharci ah siiyaan gudbinta sharci. Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Qaranka ee Immigrant Justice lambarka toll free ay: (312) 263-0901.
Ogow Your Rights LGBTQ (Español)
Ogow Your Rights LGBTQ (Faransiiska)
Ogow Your Rights LGBTQ (Carabi)
Ogow Your Rights Buuggooda loogu talagalay dadka ajnabiga xiray ee Luqadaha kala duwan
Dalbashada xaaladda qaxootiga / magangelyo siyaasadeed ee dalka Mareykanka: geeddi socodka iyo ururada oo kaa caawin
Magangelyo-doonka Network Housing
ASHN la ciidammadu si ay u siiyaan hoy iyo taageerada bulshada dadka magangelyo doonka ah ka shaqeeya. Ciidammada ka mid ah guriga koox ee Baltimore iyo shakhsiyaadka furo qol guryahooda. Ciidammada iyo bulshada ASHN weyn siiyaan taageerada bulshada macaamiisha.
Haweenka Asylee Enterprise (Cadhooda)
Tel: 443-850-0627. Waxay bixiyaan bulshada ababin iyo adeegyo badan oo magangalyo-doonka iyo magangelyo doone, oo ay ku jiraan maaraynta kiiska, tababar shaqo, Xiisadaha Ingiriiska, barnaamijyada fayoqabka iyo nafaqada Isniin-Khamiis. Intaa waxaa dheer, Baqeen bixisaa guryaha KMG in ay dumarka magangelyo-doonka. aagga Service: Baltimore
Xuquuqda Aadanaha berooshkunat
Barnaamijka wakiil sharci pro bono kulan qareenada wanaagsan la magangalyo doonka kuwaas oo u baahan caawimaad ah oo aan haddii kale awoodi doonaan in ay awoodi matalaad dhinaca sharciga ah oo tayo sare leh.
Adeegyada Refugee Lutheran Socdaalka iyo (LIRS)
Tel: 410-230-2700. Ururka Qaran ee soo-galootiga iyo qaxootiga u doodidda iyo barnaamijyada la shaqeeya kooxaha kale oo badan in laga xoreeyo dalka ah. Waxay diiradda saaraan dib u dejinta qaxootiga iyo isdhexgalka bulshada, beddeli kara in lagu hayo dadka magangelyo doonka ah, keenida qoyska iyo daryeelka korinta dhalinyarada soo galootiga aan lala socon. aagga Service: Nationwide.
Hotline Resource Tahriibka Qaranka
Tel: 1-888-373-7888 ama text "HELP" ama "INFO" in BeFree (233733). qaranka A, hotline toll-free isku xira dhibanayaasha ka ganacsiga, xirfadlayaasha, iyo xubnaha bulshada si ay macluumaad iyo xawilid, iyo sidoo kale ilaha dhaqaale ee tababar iyo gargaar farsamo. aagga Service: Nationwide.
Northwest Immigrant Rights Mashaariicda
Northwest Immigrant Rights Project waxay bixisaa adeegyada waxbarashada bulshada, saamaynta dhaaranay, adeegyada sharciga si toos ah, taageero ka badbaada rabshadaha qoyska iyo dambiyada kale ee, doonka, adeegyada qoyska, taageero loogu talagalay carruurta & dhalinyarada, jinsiyadda, Action raagtaa & HADDII, iyo xabsi iyo mustaafuris difaaca.
World Wide Access to-Bono Pro Talo Sharciyeed ee magangelyo doonka, by Country
page Tani waxa ay muujinaysaa adeegyada sharciga ee bilaashka ah ama jaban ee laga helo dalalka adduunka oo dhan. Eeg haddii aad dalka uu leeyahay adeegyo sharci oo bilaash kuu dhow!
Sidoo kale, fadlan ka hubi our Halka laga helo khayraadka sharciga ah bogga si aad u hesho qof kuu soo bandhigi kartaa tilmaam iyo talo xirfadeed oo ku saabsan kiiskaaga.